Dhamman degmooyinka Norwey waxa ku yaalla xafiiska Nav. Xafiiska Nav waxaan ka heli karaa caawimo haddii aan u baahanahey inaan shaqo helno, ama aan u baahanahey caawimo waqtiga la xanuunsanayo ama waqtigayada kale ee noloshu adkaato.
Sidoo kale waxay Nav masuul ka tahey dhammaan nidaamyada caymiska dadweynaha. Nav waxay masuul ka tahay caawimada caydha. Inkasta oo ujeedada Nav tahay in dadka badankoodu shaqo tagaan hadana Nav masuul kama aha inaan shaqo helno ama shaqo heysano.
Qaar ka mid ah ujeeddada guud ee Nav waa
in dad badani shaqo iyo hawl galaan iyo in in yari qaadato nidaamka gunnooyinka
in laga qaybqaato suuq-shaqo oo si fiican u shaqaynaya
in la bixiyo adeeg fiican oo lagu sarjaray isticmaalaha xaaladdiisa iyo baahidiisa